Fepetra fampiasana -
Fampiasana fanazavana nomena antsika
Famerana ny andraikitra
Vaovao farany momba ny: 14 Mar 2019
Ny fampiasana ny fampiharana companyhub dia mety manaiky ny fepetra sy fepetra etsy ambany. Vakio azafady ny fepetra sy fepetra etsy ambany raha tsy efa nanaiky. Amin'ny fanindriana ny bokotra ankasitrahana dia manaiky ny hifatotra ianao ary manjary antoko ity fifanarahana ity. Raha tsy manaiky ny iray amin'ireo fepetra sy fepetra voalaza etsy ambany ianao dia aza mampiasa na miditra amin'ny fampiharana companyhub.
Terms sy fepetra ho an'ny fampiharana CompanyHub
CompanyHub Application, dia Software ho toy ny Service Platform (SaaS) izay tompon'ny orinasa CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd. (antsoina hoe CompanyHub, izahay na anay), orinasa iray nampidirina tao amin'ny orinasa Act 1956 niaraka tamin'ny birao najoro tao Sanjivani, Gandharv Nagari, Nasik Road, Nasik, Maharashtra, India - 422101. Amin'ny alalan'ny fahazoana sy fampiasana ny fampiharana CompanyHub momba ny fitantanana mivantana sy ny varotra fitsaboana ("Services"), ianao, ilay olona na orinasa izay nomena fahazoan-dàlana voafetra hampiasa ny fampiharana CompanyHub (izay lazaina hoe "ianao" na "anao "), Dia manaiky ny hampifanaraka ireo fepetra sy fepetra hafa, ary koa ireo torolàlana hafa, fitsipika sy teny fanampiny voatondro eto (miaraka," Terms ") ary ny fampiasana na ny fidirana tahaka izany dia mampisy fifanarahana eo aminao sy CompanyHub.
Raha manaiky ireo fepetra sy fepetra ireo ary manaiky ny fandoavana ny fiheverana efa nifanaiky, dia manaiky ny hanome anao ny fahazoan-dàlana voafetra, tsy azo avela, tsy ekena, tsy azo avela hampiasana ny fampiharana CompanyHub, ny orinasa CompanyHub, mba hanomezana ireo tolotra voatanisa eto.
Manaiky sy manaiky ianao fa mety hanova imailaka matetika ireo fepetra ireo, ireo singa sasantsasany amin'ny fampiharana CompanyHub sy / na ireo singa sasantsasany amin'ny Services, tsy misy fampandrenesana ary ny fe-potoana voafaritra rehetra sy ny fanovana dia mahomby amin'ny famoahana fampandrenesana vaovao. Ianao ihany no tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana ireo fepetra ireo ary ny fanovàna fanavaozam-potoana ho an'ny fanavaozana. Ny fampiasana ny fampiharana CompanyHub taorian'ny famoahana ireo fanavaozana ireo dia midika hoe fanekena ny fanovana.
CompanyHub dia afaka manara-maso sy manova singa sasantsasany amin'ny Services ho an'ny (1) araka ny fepetra mifanaraka amin'ny lalàna, fepetra na fangatahana governemanta hafa; (2) mba hikarakara tsara ny serivisy na hiaro ny tenany sy ireo mpampiasa azy. Ny CompanyHub dia manakana ny zo hanova, hanilikilika na hanafoana ireo fitaovam-piainana izay mipetraka na alefa any amin'ny mpaneraserany, fa amin'ny maha-tokana azy dia mino fa tsy azo ekena na mandika ny lalàna na ireo fepetra ireo.
Amin'ny alalan'ny fampiharana CompanyHub dia manampy anao amin'ny fanangonana ny angon-drakitra mifandraika amin'ny varotra amin'ny toerana iray ianao, manao fanadihadiana ary mamoaka tatitra mba hanampy anao amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mazava. Rehefa misoratra anarana sy manamarina ny kaonty Google ianao, ny fampiharana CompanyHub dia hampiakatra ny adiresy mailaka rehetra nalefanao farany tamin'ny 6 (Enina) volana taorian'ny daty fisoratana anarana. Ny fampiharana CompanyHub dia handinika avy hatrany ny ao anatin'ny mailaka ary hamoaka lisitra misy ny fifandraisana manan-danja indrindra. Voalaza fa io lisitra io ihany dia manondro sy tsy mahafa-po. Ho an'ny fampiharana mahomby amin'ny fampiharana CompanyHub, mila ampidirinao ny firaketana momba ny fifandraisana, orinasa ary ny fifanarahana mifandraika amin'ireo orinasa ireo.
Ankoatra ny fitantanana mivantana amin'ny fampiharana CompanyHub, ny CompanyHub dia manome ireto tolotra manaraka ireto
Google Chrome Browser Plugin ho an'ny fanaraha-maso ny hetsika mailaka ary manome tatitra momba ny hetsika toy izany
Fitsipika mba hampifanarahana ny fizarana data ary hitazonana ny ambaratonga
Soso-kevitra hanaraka ny fifandraisana amin'izao fotoana izao
Fampahatsiahivana raha tsy mamaly ny mailaka sy ny adiresy isan'andro ary ny fanaraha-maso sns
Vaovao farany momba ny fampiharana CompanyHub
Ny fifampiresahana an-telefaona misy eo aminao sy izahay mifandraika amin'ny Sampana dia mety ho voarakitra ho an'ny tanjon'ny tranonkalantsika ary manaiky izany fanaraha-maso sy fandraketana izany ianareo.
Ny dingana arahinay dia arahin'ny mpivarotra an-tserasera Paddle.com. Paddle.com no mpandrindra ny firaketana ny baikon-tsika rehetra. Paddle dia manome ny fanadihadiana rehetra momba ny serivisy sy ny fiverenana.
Voasakana anao tsy ho afaka ary tsy:
Mampifanaraka amin'ny fitrandrahana ny angona angona, manasitrana, manodina, na mampiasa fomba amam-pitsipika izay mandefa rindrambaiko ho an'ny orinasa CompanyHub.
Modify, ampifanaraho, mandika na manova ny ampahany amin'ny fampiharana CompanyHub na ny Services.
Ampiasao ny robot, spider, tranonkala fikarohana / fikarohana, na fitaovana hafa mba haka na hanondro ny ampahany amin'ny fampiharana CompanyHub na ny Services.
Manavao na mametram-peo ny ampahan'ny pejy web izay anisan'ny fampiharana CompanyHub na ny Services.
Ampiasao ny tranokala na ny serivisy, na tsia na tsy misy fepetra, manitsakitsaka lalàna ara-panjakana, fanjakana, firenena na iraisam-pirenena.
Mampita viriosy, kankana, fahavoazana, soavaly trozona na zavatra hafa amin'ny toetra manimba.
Ankoatra ireo fepetra voalaza etsy ambony, dia azonao antoka fa:
Ny fampiharana CompanyHub dia ampiasaina amin'ny fividianana mivantana anao na ny fikambanana misy anao
Ny fidirana amin'ny orinasa CompanyHub dia tsy azo omena afa-tsy amin'ny mpiasa, solontenan'ny orinasa
Tsy manome na manome anao ny fampiharana CompanyHub amin'ny endrika hafa (anisan'izany ny fizarana ny fahazoan-dàlana fidirana amin'ny orinasa CompanyHub), na manontolo na ampahany (ao anatin'izany fa tsy voafetra fotsiny amin'ny fizarana ny code code na loharano) mankany amin'ny antoko fahatelo raha tsy misy ny faneken'ny alalana an-tsoratra
Tsy misy na inona na inona ao anatin'io fanovàna io dia atao toy ny fanomezana fahazoan-dàlana amin'ny zo ara-jeografika nomena antsika na ny zo hampiasa ny fampiharana CompanyHub na ny iray amin'ireo tolotra hafa ankoatr'izay voalaza etsy ambany.
Ny anaran'ny orinasa sy ny logos sy ny vokatra sy ny serivisy rehetra mifandraika amin'izany, ny marika famolavolana sy ny teny filamatra dia marika famantarana sy marika ampiasain'ny CompanyHub ary izy irery ihany ny CompanyHub. Ny fampiharana CompanyHub, loharanom-baovaon-drakitra, tetikasa ary fomba ampiasaina ho an'ny serivisy dia zon'ny zon'ny orinasa CompanyHub.
Ankoatra ny fahazoan-dàlana voafetra hampiasa ny fampiharana CompanyHub araka ny voalaza mazava ao, ny zo, ny lohateny ary ny fahalianana amin'ny zo ara-tsaina, ary anisan'izany ny zon'ny mpamorona, ny mari-pamantarana sy ny zo fototra, nomena ny Service, anisan'izany ny ao anatiny ary ny fisafidianana sy ny fandaminana azy, dia hijanona miaraka amintsika foana. Tsy misy na inona na inona amin'ireto fepetra sy fepetra ireto ary / na ny fifanarahana dia natao handefasana ny ampahany na ampahany amin'ireo zo ireo.
Ankoatra ny fahazoan-dàlana hampiasa ny fampiharana CompanyHub, araka ny nahazoan-dalana araka ireo fepetra ireo, dia tsy omena zo amin'ny zon'ny mpamorona, marika, patanty hafa ara-tsaina ianao ao amin'ny orinasa CompanyHub na ny serivisy, na ny fomba ambarany na ny teknolojia voalaza ao. Ireo zo rehetra ireo dia notànan'ny CompanyHub.
Ny zon'ny tsirairay, ny lohateniny ary ny fahalianany, anisan'izany ny marika sy copyrights momba ny anaran'ny sehatra sy ny fampiharana CompanyHub izay omena amin'ny Services dia voatokana amin'ny CompanyHub. Ny fidirana, ny famoahana, ny famerenam-bidy, ny fifindrana ary / na ny fifampiraharahana amin'ny fampiharana rehetra ao amin'ny fampiharana CompanyHub amin'ny fomba hafa, na amin'ny ankapobeny na amin'ny ampahany, dia voarara tanteraka, noho ny tsy fanatanterahana hetsika henjana henjana hanoherana anao.
Hahazo ny zo rehetra, ny lohateninao ary ny fahaliananao amin'ireo angona misy anao ao amin'ny fampiharana CompanyHub. Hahazo ihany koa ny zon'ny tsirairay, ny lohateniny ary ny fahalianana amin'ny fanadihadiana sy ny tatitra novokarina tamin'ny fampiharana CompanyHub.
Ny fampahafantarana tsiambaratelo, na propriétaire na manokana azo omena antsika, na azontsika amin'ny alàlan'ny fandraketana an-tsarimihetsika mailaka, dia atao tsiambaratelo amin'ny fotoana rehetra, arak'izay omena ao amin'ny Politika Fiarovana Fiarovana. Ny valinteny, valinteny, fanontaniana, fanehoan-kevitra, soso-kevitra, hevitra na ny toy, izay halefanareo dia ho raisina ho toy ny tsy tsiambaratelo sy tsy manan-kialofana.
CompanyHub dia manolo-tena hiaro ny tsiambaratelo sy ny tsiambaratelo momba ny mombamomba anao manokana izay mety hangataka sy handray anao. Mba hamakiana ny fanambaràn'ny politika momba ny fiainana manokana momba ny fampahalalam-baovao tahaka itony, dia azonao atao ny manondro anay POLITIKA FIAROVANA FIAINAN'OLONA.
CompanyHub dia mampita vaovao rehefa avy nandinika ny angon-drakitra nomenao anao sy ny angon-drakitra nalefa tamin'ny mailaka. CompanyHub dia tsy afaka mifehy ny fahamarinan'ny votoatiny, ny fahamendrehana na ny kalitaon'ny data nomenao, ary ny fampiharana CompanyHub dia mety hampiditra tsy ara-teknika na fahadisoana ara-teknisiana, ary tsy manao antoka isika, ary mety ho tompon'andraikitra amin'ny disadisa toy izany ny fampiharana orinasa CompanyHub, ny kalitao, na ny ara-dalàna, na ny fanarahan-dalàna hafa momba ny zo ara-tsaina, na ny fahaverezana na ny fahavoazana vokatra.
Manoro hevitra ianao ary nampitandrina fa ny fampahalalana rehetra omenao dia raisinay amim-pinoana, tsy am-piadino mihitsy ny fiantrana ny fampahalalam-baovao ary ny CompanyHub dia tsy manamarina, tsy manaiky, na manaiky ny fanambarana sy ny solontenan'ny Advertiser / s voatanisa amin'ny CompanyHub.
CompanyHub dia mitazona ny zo, amin'ny fahamendrehany sy tsy misy adidy, hanatsara ny, na hanitsy ny fahadisoana na ny fanadinoana, ny ampahany amin'ny fampiharana CompanyHub.
Ny rohy mankany amin'ireo tranonkala ivelany dia azo omena ao anatin'ny votoatin'ny fampiharana CompanyHub na tolotra hafa ho tombontsoa ho anao. Ny lisitry ny tranonkala ivelany dia tsy midika hoe fanamarinana ny tranonkala CompanyHub na ny mpiara-miasa aminy. Rehefa tsindry amin'ny sora-baventy dokam-barotra, rohy sponsor, na rohy hafa avy amin'ny Website na hafa, ny navigateur dia afaka mamadika anao automatique ho any amin'ny varavarankely vaovao izay tsy nampiantrano na orinasa CompanyHub. CompanyHub dia tsy tompon'andraikitra amin'ny votoaty rehetra navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny antoko fahatelo ary tsy mandray andraikitra hiantohana ny fampisehoana na ny fampiasana tranokala hafa toy izany. CompanyHub sy ireo mpiara-miasa aminy dia tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatiny, ny asany, ny maha-azo antoka azy na ny fiarovana ara-teknolojika amin'ireo toerana ivelany ireo. Manakana ny zo hanala ny rohy mankany amin'ny tranokalan'ny antoko any amin'ny Services isika na dia tsy manana adidy hanao izany aza isika.
Ny CompanyHub dia mitazona ny zo hanery / hanova ny fitsipiky ny fidirana amin'ny fampiharana CompanyHub, na amin'ny fepetra fidirana, fotoana, fitaovana, faneriterena fidirana na zavatra hafa, izay havaozina isaky ny vanin'andriamanitra. Ny andraikitry ny mpiserasera dia miankina amin'ireo fepetra ireo isaky ny mampiasa ny Service izy ireo.
Manome toky izahay fa isika no tompon'ny fampiharana CompanyHub, ary manana ny zo sy ny fahefana hanomezana ny fahazoan-dàlana hampiasa ny fampiharana CompanyHub. Tsy manome antoka izahay, miantoka, manaiky fepetra na maneho izay fampiharana CompanyHub fampiharana ny fepetra takianareo na ny fampiasana ny CompanyHub fampiharana dia tsy misy ifandraisany na tsy misy fahadisoana. Tsy misy fampahafantarana amin'ny teny verbal na zavatra hafa omen'i Us dia hanome fiantohana na hampitombo ny andraikitsika, ary tsy hiantehitra amin'ny fampahalalana toy izany ianao.
Mbola manome antoka ihany koa izahay fa ny fampiharana CompanyHub dia tsy manakana ny fampiasana ny zon'ny mpamorona, ny marika na ny patanty misy amin'izao fotoana izao, ary izahay dia manaiky hanafaka sy hitazona anao ho tsy mampidi-doza ho an'ny fatiantoka, ny sandany, ny fahavoazana na ny fandaniana ny saram-pandraharahana sy ny saram-pitsarana) izay vokatry ny fitakiana, fangatahana na hetsika milaza fa ny fampiharana CompanyHub dia manitsakitsaka na mandika ny zon'ny mpamorona, ny mari-pamantarana, ny patant na ny zo ara-tsaina hafa amin'ny antoko fahatelo, raha toa ka mampifanaraka antsika amin'ny fotoana mety sy manitatra ny fiaraha-miasa feno amin'ny fiomanana fiarovana amin'ny filazana toy izany.
Ny fampiasana ny serivisy, ny fianteherana amin'ny fampiharana CompanyHub, ary ny fampiasana ny Internet amin'ny ankapobeny dia mety ho atsy ho atsy. CompanyHub dia manavakavaka ny andraikiny na ny andraikiny amin'ny fahamarina, ny votoatiny, ny fahafenoana, ny ara-dalàna, ny fahamendrehana, na ny fampiharana na ny fampiasana vaovao na zavatra hita amin'ny vokatra / tatitra vokarina amin'ny Service.
Ny fampiharana CompanyHub sy ny tolotra dia omena amin'ny "As Is" sy "As Available" raha tsy misy ny fanomezan-dàlana rehetra azo atao, afa-tsy izay voalaza ao anatin'io, na tenin'olon-tokana na an-tsoratra na lalàna, anisan'izany, fa tsy voafetra ho, ny antoka azo antoka ny fahaiza-manao, ny fahatsapana ho an'ny tanjona iray manokana, na ny tsy fanitsakitsahana. CompanyHub dia manavakavaka, araka ny fepetra azo ekena eo ambanin'ny lalàna, ny fanomezan-toky mikasika ny fiarovana, ny fahamendrehana, ny fahamendrehana ary ny fahombiazan'ny fampiharana ny orinasa sy ny serivisy. CompanyHub dia tsy manome antoka fa ny fahadisoana na ny fahadisoana dia hohamarinina na ny votoaty dia maimaim-poana viriosy na ireo singa hafa manimba. Ny CompanyHub koa dia manavakavaka ny fepetra rehetra sy ny zavatra rehetra azo omena araka ny lalàna momba ny fampahalalana, ny entana na ny serivisy, azo avy amin'ny alalan'ny dokam-barotra na voaray avy amin'ny rohy rehetra omena na amin'ny alalan'ny serivisy.
CompanyHub dia tsy mandray ny andraikiny na ny andraikiny amin'ny fahamarinam-pitondran-tena, feno, na ilaina amin'ny tatitra rehetra, ny fanadihadiana na ny tolotra omena amin'ny fampiharana CompanyHub. Tsy misy na inona na inona hitranga amin'ny CompanyHub, noho ny fampiasanao, ny fampiasana tsy ara-dalàna na ny fiankinan-doha amin'ny fampiharana CompanyHub na fampiasana (na tsy fahafahana mampiasa), ny fiankinan-doha na ny fahombiazan'ny tolotra, ho an'ny fahavoazana na inona na inona, anisan'izany mivantana, manokana Ny voka-pifidianana, ny fampiasana na ny angon-drakitra, ny fanararaotana (anisan'izany ny fahamendrehana) na ny teoria hafa, na dia fantatr'izy ireo aza ny CompanyHub na nanoro hevitra ny mety hisian'ny fahasimbana toy izany na mifandray amin'ny fampiasana (na tsy fahafahana mampiasa) na ny fampiharana ny fampiharana CompanyHub na ny serivisy.
Manaiky ny andraikitra rehetra sy ny loza mety hampiasana ny fampiharana CompanyHub sy ny serivisy. Ireo fetra voalaza etsy ambony ireo dia ampiharina na dia eo aza ny tsy fahombiazan'ny tanjona tena manan-danja amin'ny famerenana voafetra sy amin'ny ambaratonga malalaka nomena azy araka ny lalàna manan-kery. Raha voatazona fa ny fanilihana na ny famerana ny tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana vokatry ny fahavoazana na ny loza dia tsy azo ampiharina, amin'ny toe-javatra toy izany dia voafetra ny fepetra faran'izay avelan'ny lalàna.
Manaiky ny hamotsorana sy hitazona anay sy ny mpiaro anay, ny tale, ny solontenay ary ny mpiasa izahay, tsy misy ifandraisany amin'ny fangatahana rehetra na ny fangatahana, anisan'izany ny saram-panoloran-kevitra ara-drariny, ataon'ireo antoko fahatelo noho ny fiatrehana ireo fepetra ireo, ny fanitsakitsahanao ny lalàna rehetra, na ny fanitsakitsahanao ny zon'ny antoko fahatelo, anisan'izany ny fanitsakitsahana anao amin'ny fananana ara-tsaina na zon'ny hafa na olona iray.
Term - Ireo fepetra ireo dia hijanona ao amin'ny heriny sy ny vokany mandra-pahatongan'ny fotoana hanohizanao hampiasa ny fampiharana CompanyHub na tolotra hafa mifandraika amin'izany.
fanamaroana - Raha noho ny antony ara-pitsarana iray no nahitana ny fepetra na ampahany amin'ireto fehezan-dalàna ireto dia tsy ho azo hafenina, ny sisa amin'ny Teny dia hanohy ny heriny manontolo sy ny vokany.
Entire fifanarahana - Ireo fepetra ireo dia ny fifanarahana manontolo misy antsika ary mametraka sy manolo ny fahatakarana na fifanarahana na alim-bolana, na an-tsoratra, na am-bava, momba ny lohahevitr'ireo fepetra ireo. Ny fampiasanao tsy tapaka ny Services dia ho porofo tsy azo lavina amin'ny fanekena anao ho an'ny fanovàna nataonay amin'ireo Terms.
fisintahana - Ny mety hitranga amin'ny fepetra rehetra momba ny fepetra dia mahomby raha tsy amin'ny fanoratana sy ny soniavin'ny anao sy ny CompanyHub.
Andraikitra - Azonao atao ny tsy mandefa ny zonao na ny adidinao amin'ireto fepetra ireto raha tsy misy ny fanekena an-tsoratra avy aminay. CompanyHub dia afaka manome ny adidiny / adidy sy zo amin'ny alalan'ireo fepetra ireo nefa tsy mila mangataka fanekena avy aminao.
Notices - Ny fitarainana rehetra, ny fangatahana ary ny fifandraisana hafa dia tsy maintsy voasoratra an-tsoratra ary heverina ho nomena (a) raha alefa amin'ny alàlan'ny mailaka an-tsoratra, vola aloa amin'ny biraony, (b) raha omena torimaso amin'ny alina, c) raha alefa amin'ny alàlan'ny fakantsera Ny famindrana sy ny fifindrana tahaka izany dia voamarina fa voaray, na (d) raha alefa amin'ny alàlan'ny mailaka elektronika, ary ny hafatra tahaka izany dia raisina ho raisina, isaky ny adiresy, ny lahatony na ny adiresy mailaka voalaza ao amin'ny Website. Ny fampitam-baovao rehetra, ny fangatahana ary ny fifandraisana hafa dia tsy maintsy voasoratra an-tsoratra ary heverina ho nomena (a) raha alefa amin'ny alàlan'ny mailaka nomena azy, aloa amin'ny alàlan'ny taratasim-bola na amin'ny alàlan'ny mailaka, amin'ny adiresy: CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd., Sanjivani, Gandharv Nagari, Nasik Road, Nasik, Maharashtra, India - 422101
Force Majeure - Tsy misy na inona na inona horaisintsika ho tompon'andraikitra na heverina ho fandavana azy noho ny tsy fahombiazany na ny fahatanterahan'ny vokatra vokatry ny asa ataon'ny governemanta, ny afo, ny tondra-drano, ny fikomiana, ny horohoron-tany, ny tsy fahampian'ny herinaratra, ny tsy fahombiazan'ny tambajotra, ny fikomiana, ny fipoahana, fitokonana (na ara-dalàna na tsy ara-dalàna), asa fampihorohoroana, asa na tsy fahampian-tsakafo, fanodikodinana ny asa na fihenam-bidy na asa hafa tsy misy antony ao anatin'ny fifehezantsika.
fanelanelanana - Ny fifandirana sy ny fahasamihafana rehetra mifandraika amin'ireo fepetra ireo dia apetraky ny Arbitration araka ny Lalàna Arbittation and Conciliation, 1996. Ny dingana rehetra dia hatao amin'ny teny anglisy. Raha tsy manaiky ny Mpifanaraka tokana ny Mpifanaraka dia hisy mpitsabo telo, ny iray isaky ny antoko, ary ny fahatelo izay nofantenin'ireo mpandimby roa voatendrin'ny antoko. Ny toerana misy ny fadiranovana dia ao Nasik, India. Ny loka rehetra omen'ilay mpandidy dia ho mandresy lahatra sy hifanerasera amin'ny antoko.
Fitantanam-pitondrana - Ireo fepetra ireo dia hifehezan'ny kaontinanta mifanaraka amin'ny lalànan'i India ary manaiky ny hanaiky ny fitsarana tokana ho an'ny fitsarana ao Nasik. Ianao no tompon'andraikitra amin'ny fanarahan-dalàna ny lalàna. CompanyHub dia mitazona ny zo hitady ny fomba rehetra azo atao amin'ny lalàna sy amin'ny fitoviana amin'ny fandikana ireo fepetra ireo.
Fifandraisana sy adidy hampahafantarana - Azafady mba mifandraisa aminay amin'ny fanontaniana rehetra momba ireo Terms. Lazao azafady ny fanitsakitsahana ny volavolan-dalàna support@companyhub.com.
fiekena - MAHATSIARO IZANY IREO NATAONTSIKA NY ANDRIAMANITRA rehetra. TSY NANOVANA TSY NANAZAVA IZAY TOKONY HITANTSIKA NY FANAZAVANA ANY AMIN'NY FANABEAZANA MOMBA NY FANABEAZANA MOMBA NY MIRALENTA SY FAMPIANARANA MOMBA NY MIRALENTA SY FAMPANDROSOANA IZANY.